व्यापार घाटा बढेको बढ्यै ! Bizshala -
व्यापार घाटा बढेको बढ्यै !
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको सात महीनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । व्यापार घाटा बढेर रु सात खर्ब ८० अर्ब १७ करोड पुगेको छ ।